Tikugashirei webhusaiti yedu.
Laminated Nhabvu & Nhabvu bhora
Rubber Bhora & Nhabvu bhora
Gorofu Pamusoro Rubha Nhabvu & Nhabvu bhora
Pebble & Grain Surface Rubber Nhabvu & Nhabvu bhora
Smooth Pamusoro Rubber Nhabvu & Nhabvu bhora
Kusona Nhabvu & Nhabvu bhora
Ipo kutengeserana kwepasi rese kwaive kutodzikira isati yasvika kweCOVID-19 denda
Ipo kutengeserana kwepasi rese kwanga kuri kudzikira kusati kwasvika kweCOVID-19 denda, kukanganisa kwehupfumi pamwe nemagariro kwakaunzwa neCCIDID-19 kuri kukonzera kudzikira kwakanyanya kutengeserana. Kukosha kwekutengeserana nedzimwe nyika muzvinhu kwakaderera nezvikamu zvishanu muzana muQ1 2020 uye zvinotarisirwa kudzikira zvimwe ...
2020 epasi rese bhizinesi shanduko
Kudyidzana uye kudyidzana Sezvo superfast Broadbandband uye 5G inotsemurwa, nyika muna 2020 yakabatana uye yepasi rose kupfuura nakare kose. Iwe hauchada kufambisa kwemaawa kuti usvike kumisangano: unogona kungovhura laptop yako. Izvi zvine simba rakakura munzira iyo mabhizinesi nemabasa avo ...
Gore rino, isu tinotumira kunze zvakanyanya uye huwandu hwevatengi muMorocco
Gore rino, isu tinotumira kunze zvakanyanya uye huwandu hwevatengi veMorocco, asi nekuda kwezvinokosha zvekupinda nyika zveMoroccan uye zvinodiwa zvakaomarara, uye muna 2020 mutemo mutsva (matoyi ekunze anofanirwa kuitwa BV certification yekungenisa), ita akawanda Mororisi vatengi havazivi kutanga. isu ...
ne admin pane 20-06-23
Pamberi peiyo korona nyowani yakabuda (ncov-2019), Cangzhou Xinxiang International Trade Co, Ltd. inoshinga kurwisa denda, pamwe nekubatana kwenzvimbo dzakasiyana siyana, denda rakadzorwa zvakanyanya.Pakutanga kufora, Cangzhou Xinxiang In ...
Mhomho: + 86-18633709069
Changsheng Kuvaka Nhamba77, Huanghe Road, Dunhu reXinhua, Cangzhou Guta, Hebei Province China
Tungamira - Zvinowanikwa Zvigadzirwa - Sitemap